Ukucaciswa 1.Ukuklanywa kwejazi elikhethekile ukwakheka okuhle kwezindebe ezingenhla. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, i-e.the die ingafakwa obala ukufeza ifilimu ye-N-out, isindisa tim 2.On-line wide adjustment, ukulungiswa okuqhubekayo kobubanzi obuhlukile ngaphandle kokuphumula
Ngomzila okhethekile wesakhiwo se-fishtail, uhlelo lokulawula uwoyela oluhlukile; Upper and lower die lip-tuningmeeting different board thickness. I-Techincal Parameter Die ububanzi ingama-300 mm, ububanzi beBhodi bungu-600 mm, Ubukhulu bungu-20-120mm. Ububanzi bokufa ngu-450 mm, ububanzi beBhodi buyi-900 mm, Ubukhulu bungu-20-120mm. Ububanzi obufayo ngu-600 mm, ububanzi beBhodi buyi-1200 mm, Ubukhulu bungu-20-80mm
I-upper die lip ingalungisa kahle Nge-bar ye-45 degree Restrictor, i-low die lip ingashintsha. Ingakhiqiza izinto ezahlukahlukene, ukujiya okuhlukile kwemikhiqizo .Kulungele ukushuba phakathi kuka-1-10mm, ububanzi bomkhiqizo bungaphansi kuka-10000mm. Isicelo sePharamitha le-Techincal: I-PVC, i-PE, i-EVA, njll. Isicelo soMkhiqizo: Ikakhulu imboni yomkhiqizo nokwakhiwa, igumbi elingaphansi, idamu, idamu, umhubhe onguthelawayeka, indawo yokukhosela, indawo yokugcina okusanhlamvu, iphunga, ukwelashwa kwamanzi angcolile nokwakha okungangenwa ...
Ngokuklanywa kwesiteshi se-coathanger esikhethekile, ibha yokuqina engu-90 on the lip die ephezulu, udebe lwangaphansi lokufa lungashintsha ngokulungisa ukushuba kusuka ku-2-30mm. Ububanzi Bomkhiqizo Wepharamitha yobuchwepheshe: Ngezansi kuka-3000 mm. Isicelo: Ukumboza cishe wonke ama-polymers afana ne-PP, i-PE, i-PC, i-PMMA, i-EVA, i-ABS, i-PS, i-PA, i-PVC, njll. Isicelo soMkhiqizo: Isetshenziswa kakhulu ezintweni zikagesi, ekwakhiweni, embonini yamakhemikhali, emabhokisini alula, emhlobisweni wokukhangisa, njll.
Ukucaciswa kwe-Fast Screen Changer: ¢ 30-500MM Singer - Plate type duplex working position changer switcher Double - Plate type quadruple working position changer switchger Singer - Column type duplex position position Ipharamitha 1.Ukugeleza kwesiteshi ngaphandle kokugcinwa kwepulasitiki, isikhathi esifushane sokuhlala. 2.Processing lokushisa elawulwa ukwenza insimu ukulungiswa leakproof ku Coefficient ka expansio ngokwengqondo ...
Ngokuklanywa kwesiteshi se-Coat-hanger esikhethekile, udebe olungaphezulu olungaphezulu lungalungisa ukujiya komkhiqizo, enye ye-lip ephansi ene-90 degree limited bar, ehlangabezana nobukhulu bomkhiqizo ohlukile. . I-Techincal Parameter 1.Ukuqina komkhiqizo: 3-25 MM 2.Uklanywa kwezindebe ezikhethekile kufanelekile ngezinto ezahlukahlukene zemikhiqizo ye-foam. Idivayisi yokulawula ukushisa kwe-lip ekhethekile ye-3.Special, qinisekisa izidingo zokukhiqiza eziyinhlanganisela zamanani ahlukile ekubhobokeni p ...
Ngokuklanywa kwesiteshi se-coat-hanger esikhethekile, i-Upper die lip enebha ye-90 degree restoror ilungisa ukushuba, udebe lokufa oluphansi ukuhlanganiswa. Kungancishiswa ngokweqile ukukhishwa kwe-stream sensitive sensitive ekusetshenzisweni kwe-extrusion.
Ngomklamo wesiteshi se-Coat-hanger okhethekile,, enebha yokunciphisa ye-90 degree, enye yezindebe ezingenhla nezingezansi,. I-die lip isebenzisa idizayini ekhethekile yamazinyo ukuvunyelwa komhlangano ukuhlangabezana nokuqokwa kabusha kwamakhasimende .Ubukhulu bungu-2mm, Noma ngokusho kabusha kwekhasimende. I-Techincal Parameter 1.Umkhiqizo Nge: Ngezansi kuka-3000 mm. I-2.Die lip ingashintsha, Ngokuya ngezidingo zamakhasimende kungakhiwa i-dentate ephindwe kabili.